IsiJamani kubaQaleli: Ukuthetha Ngeentsapho kunye nezihlobo
Kule sifundo, sizisa isilwimi kunye negrama ngokuphathelele ukuthetha ngentsapho yakho kunye nawe. Uza kufunda amagama kunye nemibandela eya kukuvumela ukuba ukhulume malunga nosapho lwakho ngesiJamani, kunye nokuqonda oko omnye umntu akuthethayo malunga nosapho lwakhe. Unokuphulaphula nesigama!
Ukongezelela kumalungu entsapho ( kufa Familie , dee fah-I-MILL-yah), uya kufunda indlela yokubuza igama lomnye umntu (kwaye uphendule), uthetha ngobudlelwane beentsapho kwaye unike iminyaka yabantu.
Siza kuxubusha umbahluko phakathi kolawulo olusemthethweni nolungacwangciswanga "ngesiJamani".
Enye yezinto zokuqala oza kuphawula kukuba ezininzi zamagama zesiJamani zentsapho zifana nemigaqo yesiNgesi. Kulula ukubona ulwimi lwaseJamani olusondeleyo "ukufana kwentsapho" phakathi komzalwana / uBruder , uyise / iVater , okanye intombi / iTchchter . Sibiza loo magama afanayo kwiilwimi ezimbini. Kukho iincwadana ezininzi zesiNgesi-isiJamani kwintsapho. Abanye bayaziwayo ngenxa yesiqhelo esifanayo sesiLatini okanye isiFrentshi: usapho / uFamilie , umalume / u- Onkel , njl.
Emva kokuba ufunde le sifundo, uya kukwazi ukufunda nokuqonda isiqendu esifutshane ngesiJamani malunga nentsapho yakho okanye omnye umntu. Uyakukwazi ukuza wakho umthi wentsapho ( Stammbaum ) ngesiJamani!
I-AUDIO : Cofa kwiimpawu zesiJamani ezinxulumene ngezansi ukuze uzive.
I-Familienmitglieder - Amalungu eNtsapho
Isaziso kumabinzana apha ngezantsi apho xa uthetha ngomntu wesifa ( ukufa ) (okanye into), i-pronounmer mein iphelile e . Xa uthetha ngomntu womntu (okanye umntu), andinayo isiphelo kwiimeko ezikhethiweyo (umxholo). Ezinye iifom eziphathekayo (i- breast , yayo; i- dein , yakho, njl. Njl.) Isebenza ngendlela efanayo. I-e yokugqibela e kwisiJamani isoloko ivakaliswa: ( meine = IMINE-ah)
afe uMutter - meine Mutter unina - umama
der Vater - mein Vater utata - utata
afe Eltern - meine Eltern (pl.) abazali - bam abazali
der Sohn - sein Sohn unyana - wakhe unyana
Ufa u-Tochter - seine Tochter intombi-yakhe intombi
der Bruder - ihr Bruder umntakwabo-umntakwabo
uyafa uSweswester - seine Schwester udade-udadewabo
I-AUDIO (mp3 okanye i-WAV) kula magama
Ufa umGeschwister - meine uGeschwister (pl.) abantakwabo / abazalwana kunye noodadewethu-abazalwana kunye nodadewethu
kufa Großmutter - meine Großmutter ugogo-ugogo
afe Oma - meine Oma Umkhulu / ugogo - umkhulu wam
der Großvater - dein Großvater utatomkhulu-wakho utata
der Opa - sein Opa umkhulu / igramps - umkhulu wakhe
der Enkelsohn - mein Enkelsohn Umzukulwana - umzukulu wam
afe Enkelin - seine Enkelin umzukulu - umzukulu wakhe
Amagama angakumbi entsapho kwiGrafti yeentsapho zaseJamani.
Indlela yokusebenzisa ithoyilethi yaseFransi
Amagama okuQala amaFrentshi
'I-Rude French' Inkolelo
Izibambiso zesiTenzi zesiTali: Hlala kwakhona
Kutheni Akufanele Ukhawule iipototaki zeNicotine
IColugos Ayilona iLemurs
Ukusebenzisa i-"Inkcubeko yokwesaba" ye-Glassner yeTechsis kuMbutho wanamhlanje
Izinzuzo ze-Homeopathic Bird Izifo
U kubhala I zixhobo